Accueil > Gazetin'ny nosy > Fivoriamben’ny frankôfônia: Herintaona aty aoriana, tsy hita izay vokany
Fivoriamben’ny frankôfônia: Herintaona aty aoriana, tsy hita izay vokany
Ny 21 novambra 2016, izany hoe herintaona katroka amin’ity androany ity, no nisokatra voalohany tamin’ny fomba ofisialy ny hetsika ara-kolotoraly sy ara-barotra izay tafiditra tao anatin’ny fihaonana an-tampon’ny frankôfônia, notanterahina teto Antananarivo. Teny amin’ny “Village de la Francophonie” eny Andohatapenaka moa no nanaovana izany hetsika izany. Raha tsiahivina dia ny 22 novambra 2016 vao tena nanomboka ny fivoriana teny amin’ny CCI Ivato ary ny 26 sy ny 27 novambra kosa no nanaovana ny fihaonana an-tampon’ireo filoham-panjakana avy amin’ireo firenena mpikambana eo anivon’ny OIF (Vondron’ireo tany mpampiasa ny teny frantsay). Herintaona katroka no nanaovana ity fivoriana iraisam-pirenena lehibe ity teto amintsika, izay nandanian’ny fanjakana malagasy vola tsy toko tsy forohina. Ho an’ireo olom-pirenena mahatsiaro izany dia fanontaniana mety apetrany ny hoe : “Inona no vokatra azo tsapain-tanana, herintaona aty aorian’ny nandraisantsika Malagasy an’izany fivoriamben’ny Frankôfônia izany?” Tsiahivina ihany fa talohan’ny fivoriana dia noventiventesin’ny fitondrana mijoro ankehitriny ary nampidirina tao an-tsain’ny mponina fa hitondra vokatsoa lehibe ho an’ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fandraisana an’io fihaonana an-tampony io satria hanamafy ny fiverenan’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, hiteraka asa maro, betsaka ny fotodrafitrasa hatsangana, sns sns.
Raha mandinika amin’ny fomba fijery mahitsy dia tsy misy angamba olom-pirenena iray ka hilaza fa tena nitondra voka-tsoa ary nampiova ny fiainan’ny vahoaka Malagasy iny fihaonana an-tampony natao tamin’ny taon-dasa iny. Ny zava-misy aza dia miha mahantra hatrany ny mponina, ny tsy an’asa mitombo ka lasa mivarotra mameno ny sisin-dalana, ny tsy fandriam-pahalemana efa hiarahan’ny rehetra mahita fa mirongatra manerana ny Nosy, etsy ankilan’izay ny vidim-piainana midangana ary tsy voafehin’ny fanjakana intsony. Dia hapetraka ihany ny fanontaniana: “Inona no tena tombony azon’ny Malagasy maherin’ny 23 tapitrisa tamin’ity fihaonana an-tampony ny Frankôfônia ity?” Ny lalan’ny Frankôfônia izay mampitohy an’i Ivato sy Tsarasoatra aza mandrak’ity ny androany dia mbola tsy misokatra ho an’ny mponina eto Andrenivohitra ary efa miha ratsy sy miha potika tsikelikely ny fotodrafitrasa. Raha ny momba ilay “Village de la Francophonie » etsy Andohatapenaka kosa indray dia tsy fantatrao hoe nitondra inona ho an’ny vahoaka malagasy ny fisiany. Na misokatra ho an’ny rehetra aza ny toerana dia tsy ny vahoaka na ireo mpandraharaha madinika no afaka hampiasa azy fa ireo manan-katao irery ihany.